Nepali Christian Song | परमेश्‍वर महिमा साथ संसारको पूर्वमा देखा पर्नु भएको छ | with lyrics | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
Nepali Christian Song | परमेश्‍वर महिमा साथ संसारको पूर्वमा देखा पर्नु भएको छ | with lyrics
22 अक्टोबर 2021
परमेश्‍वरले ब्रह्माण्डभरि काम गरिरहनुभएको छ।
सबै देशहरू र सम्प्रदायहरू हल्लाइदिने
पूर्वमा गर्जनका तालीहरू रोकिदैनन्।
सबैलाई वर्तमानमा ल्याउने, सबैमाथि विजय गर्ने
उहाँको आवाज हो।
यहि प्रवाहमा सबै पर्छन् र उहाँमाथि समर्पित हुन्छन्।
किनकि उहाँले पहिले नै पृथ्वीबाट महिमा फिर्ता लिनुभएको छ
र पूर्वबाट पुन: जारी गर्नुभएको छ।
उहाँको महिमालाई को देख्न खोज्दैन?
उत्सुक भएर को उहाँको आगमन कुर्दैन र?
उहाँ पुन: देखा पर्न को तिर्खाएको छैन?
उहाँको प्रेमिलो स्वभाव को सम्झिदैन?
उहाँको ज्योतिमा नआउने को होला?
कनानको प्रचुरता नहेर्ने को होला?
उद्धारकको आगमन कसले चाहदैन?
सर्वशक्तिमानलाई कसले प्रशंसा गर्दैन?
परमेश्‍वरको आवाज पृथ्वीभरि फैलिनुपर्छ।
उहाँका चुनिएकाहरूसँग, उहाँलाई अझै धेरै भन्नु छ।
शक्तिशाली गर्जनले पहाड, नदी हल्लाए झैँ
उहाँ सारा ब्रह्माण्ड र मानवजातिसँग बोल्नुहुन्छ।
तसर्थ सबैले प्रेम गर्ने उहाँको वचन
मानवको खजाना बन्छ।
बिजुली पूर्व देखि पश्चिमसम्म चम्कन्छ।
उहाँको वचन त्याग्न मानव अनिच्छुक हुन्छ
उहाँको वचन बुझ्‍न नसकिने भएपनि आनन्द ल्याउँछ।
उहाँको आगमनमा सबै रमाउँछन्।
कुनै नाबालकको जन्मोत्सव मनाए झैँ ।
उहाँको वचनले सबैलाई उहाँ सामु ल्याउँछ।
औपचारिक रुपमा उहाँ मानवबीच प्रवेश गर्नुहुन्छ
त्यसैले सबै उहाँको आराधना गर्न आउँछन्।
उहाँको वचन र महिमाको कारण
सबै उहाँ सामु आइ पूर्वको बिजुली देख्छन्।
उहाँ पूर्वमा जैतुनको डाँडामा ओर्लनुभएको छ,
पृथ्वीमा पहिलेदेखि बस्नुभएको छ
यहुदीको छोरा नभई,
पूर्वको बिजुली हुनुहुन्छ उहाँ
उहाँले मानवलाई छोडेर,
महिमाका साथ पुन: देखा पर्नुभएको छ।
परमेश्‍वर उहाँ हुनुहुन्छ, जसको युगौ देखि आराधना गरिएको
युगौ अगाडी इस्राएलीद्वारा त्यागिएको बालक पनि,
वर्तमानको महिमित सर्वशक्तिमान परमेश्‍वर!
उहाँ केवल यो चाहनुहुन्छ:
सबै उहाँको सिंहासन सामु आउन्
उहाँको मुहार, कार्य हेर्न, उहाँको आवाज सुन्न।
उहाँको योजनाको पराकाष्ठा, अन्त्य
र उहाँको व्यवस्थापनको उद्देश्य यहि।
सबै राष्ट्रले उहाँलाई आराधना र स्वीकार गरुन्।
सबै मानिस उहाँलाई विश्‍वास गरि उहाँको अधिनमा रहुन्।